ပန်းချီသန်းဌေးမောင် – S O S !!! , Save our students, Myanmar | MoeMaKa Burmese News & Media
ပန်းချီသန်းဌေးမောင် – S O S !!! , Save our students, Myanmar
ပန်းချီဆရာ၏ သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က စကား – ဟောဒီ ဒီဇိုင်းလုပ်ရတာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရသလိုပဲ နာတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာသိဖို့ လုပ်တယ်။ ဓါတ်ပုံမူရင်းပိုင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
One Response to ပန်းချီသန်းဌေးမောင် – S O S !!! , Save our students, Myanmar
htwe on March 6, 2015 at 5:09 am
Thanks for the photo and the photographer. How could they do that, don’t they have kids and students in their family, they should try to use their brain and heart to follow Buddha